Booskii Somaliland ee koobka Aduunka dalalka aan la aqoosanayn oo lagu badelay koox ku dheeleysa Magaca Gobolka Baraawe ee Soomaaliya? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Booskii Somaliland ee koobka Aduunka dalalka aan la aqoosanayn oo lagu badelay koox ku dheeleysa Magaca Gobolka Baraawe ee Soomaaliya?
Published on June 1, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(01-06-2018) Xidhiidhka kubadda cagta Adduunka waddamada aan la ictiraafsanayn ayaa booskii Somaliland ee ku buuxiyey koox yar oo ka socota Somaliya, kaddib markii sida la sheegay Jamhuuriyadda Somaliland ay ka gaabisay inay ka shaqayso sidii ay booskeeda u xejisan lahayd.
Xaflad weyn oo xalay lagu qabtay magaalada London oo lagaga dhowaaqay in Koobka Adduunka waddamada aan la aqoonsanayn ee 2018 uu si rasmi ah uga furan yahaya, ayaa waxa si layaab leh uga soo muuqday koox ciyaaryahanno ah oo laga ururiyey magaalada London oo ku ciyaaraysay magaca Gobolka Baraawe ee Somaliya.
Tartanka oo labadii sannadoodba hal mar la qabto, ayaa galay sannadkii saddexaad oo xidhiidh ah ee uu dhacayo, waxaana sannadba sannadka kasii dambaysa uu kasbanayaa taageero badan iyo in dunidu si aad ah ula socoto. Sannadkii 2013 ayaa la bilaabay, hase yeeshee, markii xigtay oo ahayd 2016 ayaa ay Somaliland nasiib u heshay, wacdarana ka dhigtay, balse sannadkan ayaanay tegin, waxaana booskeedii si lama filaan ah uga soo muuqatay Somaliya oo gobolka Barawe uu ugu jiro.
Baraawe oo sida la ogyahay aan madax-bannaani ka doonaynin Somaliya, ayna dheer tahay in aanay xattaa ku dhowaaqin maamul jira oo u gaar ah, ayaa waxay fagaarahan caalamiga ah kaga awood bateen Somaliland oo muddo soddon sannadood ah dunida ka raadinaysay ictiraaf kaddib markii ay xorriyaddeeda dib ugala soo noqotay Somaliland 1991, taas oo ka dambaysay xasuuq, tacaddiyo binu-aadannimada ka baxsan iyo faquuq ay shacabkeedu ku jireen tan iyo maalintii ay la midoobeen Somaliya 1960-kii.
Xafladdii Furitaanka iyo Magaca weyn ee Sannadkan ciyaaruhu leeyihiin
Xaflad weyn oo ay kasoo qayb-galeen dad badan ayaa habeennimadii Jimcuhu soo galayey lagu qabtay magaalada London, halkaas oo lagu shaaciyey inuu si rasmi ah uga bilaabmay Koobka Adduunka dalalka aan ictiraafka haysan.
Ciyaartii koowaad, waxay dhex-martay Baraawe oo ku jirta booskii Somaliland iyo gobolka Tamil Eelam oo ku ciyaarayey magaca dadka Tamil-ka ee ka bara-kacay Sri Lanka ee ku sugan waddanka , waxaana 4-0 ay guushu ku raacday Baraawe.
Ciyaartaas furitaanka, waxa dhexdhexaadiye ka ahaa garsooraha caanka ah ee Mark Clattenburg oo ciyaaro waaweyn sida kuwii koobkii Adduunka 2014 soo qabtay.
Isku-aadka kooxaha iyo halkii ay Somaliland kaga jiri lahaydGroup 1: Barawa (Booskii Somaliland), Ellan Vannin, Tamil Eelam, Cascadia
Koobkii Adduunka CONIFA ee 2016 iyo halkii ay Somaliland kaga jirtay
Koobkii Adduunka CONIFA ee lagu qabtay Abkhazia sannadkii 2016, waxay Somaliland ku jirtay group D, waxaanay ku wada jireen Sapmi iyo Punjab oo hadda magac weyn ku heshay tartankan.
Jadwalkii 2016 oo dhamaystiran
Group A – Abkhazia, Chagos Islands & Western Armenia
Group B – Kurdistan, Székely Land, United Koreans in Japan
Group C – Northern Cyprus, Romani People iyo Raetia
Group D – Panjab, Sápmi, Somaliland.
Maxaa Somaliland Ka Reebay tartanka sannadkan?
Ma jiro war kasoo baxay xidhiidhka kubadda cagta Somaliland ee UK oo sannadkii 2016 abaabulay kooxdii ka qayb-gashay Koobka Adduunka dalalka aan la aqoonsan ee CONIFA oo ay ka mid ahaayeen afar ciyaartoy oo Hargeysa ka tegay iyo inta kale oo waddanka Ingiriiska laga kexeeyey, hase yeeshee, mar aanu la xidhiidhnay ayey ku gaabsadeen in Somaliland ay ku dhacday waxay ku tilmaameen ‘Nasiib-darro’.
Wasaaradda ciyaaraha ayaa 2016 waxay si adag uga soo horjeedsatay xulkii Somaliland ee wakhtigaas ka qayb-galay tartanka, waxaana uu Agaasimihii wakhtigaas oo hadda jooga wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha, Maxamed Xuseen Dhabbeeye oo ku tilmaamay inay dembi qaran galeen, isla markaana uu la xidhxidhayo markay ciyaartoygu soo laabtaan, hase yeeshee, xukuumaddii Siilaanyo ay canaan badan ugu jeedisay go’aanka khaldan ee Wasiirka ciyaaraha iyo agaasimuhu qaateen.
Ciyaaryahannadii wakhtigaas tegay Abkhazia oo shakabadda qalinkacayaaraha ay la xidhiidhay, waxay sheegeen in niyad-jabkii ay qaadeen laba sannadood ka hor ay weli kasoo kaban la’yihiin oo masuuliyiintooduu khaayimiin dalkooda dembi ka galay ku sifeeyeen. Waxa kale oo ay sheegeen intartanka sannadkan ay Somaliland ka baaqatay ay wasaaradda ciyaaruhu leedahay dembigeeda oo aanay ka hawl-gelin.
Guddoomiyihii hore ee guddida Olambikada Somaliland, Xasan Waraabe Cadde oo ka mid ahaa raggii sida adag uga shaqeeyey in 2016 ay Somaliland ka qayb-galo tartanka CONIFA, kuna guuleystay loollankii ay u galeen, ayaa tibaaxay in Somaliland ay isku dayday inay tartanka sannadkan ka-qayb-gasho, hase yeeshee uu wakhtigu ka dhacay.
Ciyaaraha sannadkan ee CONIFA waa ay ka magac weyn yihiin kuwii ay Somaliland wacaraha ka dhigtay, waxaana si aad ah loogu qaadaa dhigayaa guud ahaan warbaahinta dunida gaar ahaan kuwa Ingiriiska.
Warbaahinta dawladda Ingiriiska ee BBC oo iskugu jirta idaacado, telefishano iyo website-yo ayaa si weyn wax uga qoray tartankan, waxaana ay si gaar ah u falan-qeeyeen dalalka ka qayb-galaya oo mid walba ay taariikhdiisa, qaddiyadiisa iyo waxa uu ku doonayo madax-bannaani iyo aqoonsi ay dunida u bandhigeen.
Waddamadii Koobka Adduunka 2016 ka qayb-galay CONIFA World Cup
Punjab oo ka mid ah dhulweynaha waddanka India, hase yeeshee dadka kasoo jeeda gobolkaasi ay ka badan yihiin 125 milyan oo qof ayaa indhaha warbaahinta si weyn u haysata, waxaana xiiso usii yeelay xulkooda oo ay ka mid yihiin Injineero iyo dad magac leh oo iskood uga shaqaysta waddanka Ingiriska.